Wararka Maanta: Isniin, Sept 2 , 2018-Cabdiweli Gaas "Waxaan rabnaa inaan helno dowlad-gobolleedyo mid ah, hadafkooduna yahay Soomaalinimo"
Axad, September, 02, 2018 (HOL) – Madaxweynaha Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta ku-meel-gaarka ah ee dowlad-gobolleedka Jubbaland, halka oo u ugu qaybgelayo shirka hoggaamiyayaasha dowlad-gobolleedyada dalka.
"Waxaan u nimid shirka madasha wada-tashiga dowladdaha xubnaha ka ah dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya oo looga wada-hadlayo arrimaha masiiriga ah ee u gaarka ah, khuseeyana iskaashigooda iyo guud ahaan danta caam ka ah, waxaan rabnaa inaan helno dowlad-gobolleedyo mid ah, hadafkooduna yahay Soomaalinimo, hirgeliyana nidaamka fadaraaliisamka." ayuu yiri madaxweyne Gaas.
Cabdiweli, oo ah guddoomiyaha golaha iskaashiga dowlad-gobolleedyada wuxuu sheegay in shirka uu socon doonno muddo saddex cisho ah, isagoo inta ku daray in shirku yahay mid lagu raadinnayo qaranimo Soomaaliyeed, wadajir, wax wada qaybsi, xasillooni iyo walaaltinimo Soomaaliyeed.
Shirkan ayaa noqonaya kulankii saddexaad oo ay yeeshaan golaha iskaashiga dowlad-gobolleedyada oo ah gole ay ku mideysanyihiin dhammaan hoggaamiyayaasha dowlad-gobolleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka, waxaana saacadihii hore ee maanta gaaray Kismaayo madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabeelle.